2018 China Uphuhliso yerabha noomatshini - China Qingdao Machinery uqinise
Ekubeni bottoming ngaphandle ngowe-2016, ishishini yerabha oomatshini China yaqhubeka ukuphucula ngo-2017, kunye nokukhula kabini-digit kwingeniso kwiintengiso, ukwanda kakhulu kwemivuzo kumazwe angaphandle, kunye nokwanda kakhulu inzuzo yequmrhu. Ngokutsho wangaphakathi kushishino, iinkampani ivili basekhaya angaphandle athathe imali, kwaye nemfuno ngerabha oomatshini, ingakumbi-ngqo yerabha ekrelekrele oomatshini, luyaphucuka. Kulindeleke ukuba ishishini yerabha oomatshini China uya kungena ngokusesikweni kwijelo phezulu ngo-2018
ingeniso rubber oomatshini amashishini 'intengiso yandisa kakhulu
Ngokutsho-manani iirubber noomatshini amalungu zobungcali of China Chemical Equipment Association, ngo-2017, amashishini irabha noomatshini enkulu kulo lonke 24 zwe lakhululeka intengiso ngongeniselo 7,735 billion yuan, ukunyuka nge-11.3%. Xa mfanekiso, ingeniso intengiso lilonke ishishini yerabha noomatshini China ngo-2017 kulindeleke ukuba bafikelele 10,65 bhiliyoni yuan, ukunyuka nge-10.9%. Lo wokuqala kunyaka-on-kunyaka ukunyuka kwengeniso kwiintengiso kushishino ukusukela 2015.
Ngo-2017, izinga lokusebenza lwamashishini zerabha noomatshini China yaba eliphezulu, kwaye ingeniso kwiintengiso kwamashishini kakhulu anda. Phakathi iinkampani 24 uhlolisiso, kwakukho 15 kwiintengiso ingeniso nokukhula, ukuy 8, kwaye top-10 intengiso kwengeniso baba 6,54 billion yuan, olubalelwa ngenxa 61,4% yetotali yengeniso yentengiso, kwakunye ingqalelo icandelo zinyuke nge-0.7%. Esomelela ngokomelela.
Ngokuphawulekayo oluphuma nenzuzo
Hayi nje imali yentengiso kufikelelwe ukukhula okukhulu, kodwa ndifuna kushishino oomatshini yerabha China likaThixo liye lenyuka kakhulu ngo-2017 xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo, kunye nenzuzo icandelo liye landa kakhulu.
Kuyabonakala ukuba 24 amashishini yerabha noomatshini zonke nto ezintle, kunye namashishini ukukhula ngeniso akhawunti yesininzi. Ngokukodwa, inzuzo kwiinkampani eziseluhlwini oomatshini yerabha kuye kwaphucuka kakhulu. Ngokomzekelo, ngowe-2017, inkampani iphumelele inzuzo phantse zizigidi 93 yuan, lo gama 2016 kwaba ilahleko million 770 yuan.
Ngokutsho umhlaziyi kushishino, ukuzisa ukukhula ngeniso kakhulu nokunyuka imiyalelo kunye nokuphuculwa imveliso imajini ezinzulu. Nangona kunjalo, kubalulekile ukukhumbula ukuba ixabiso izinto ekrwada imba eqolo, okuye kwanciphisa imida yenzuzo.
Imveliso kunaniselwano namazwe angaphandle landa kakhulu
Ngokutsho manani, ngo-2017, ixabiso lonikezelo kumazwe lwamashishini 24 iirubber noomatshini eChina 1,836 billion yuan, ukuya 32.3% ngonyaka-on-nyaka. Xa mfanekiso, kuqikelelwa ukuba ixabiso lilonke kumazwe ushishino oomatshini yerabha China iya kufika US $ 360 yezigidi ngo-2017, ngonyaka-on-kunyaka ukunyuka ka-20%.
Ngokutsho umhlaziyi kushishino, ukukhula imali yengeniso yamazwe angaphandle esuka kumazwe angaphandle kubangelwa ubukhulu becala ngenxa yenyaniso yokuba iinkampani ivili China baye basabela US "nenkcaso double" kunye mveliso udinwa esekwe kwi-United States kunye mpuma Asia. Imfuno irabha noomatshini kuye kwasekwa incopho encinane. Okwangoku, yinzondelelo kweenkampani yaseTire China ukuba ukwakha imizi-mveliso aphesheya uyaqhubeka ijike. Ngokutsho manani preliminary, iiprojekthi ivili ngaphezu kwe-10 abaqala okanye uceba ukuqala. Ukongeza, i investment market ivili ngamazwe uzinzile, kwaye kukho iiprojekthi zotyalo ivili ngakumbi Continental kunye Kumho, nto leyo ibeka isiseko ezithumela iirubber oomatshini e-China. Ishishini ulindele ukuba eTshayina irabha noomatshini ezithunyelwa ziza kuqhubekeka ukuphucula-2018, yaye iqondo jikelele ziya kuba ngakumbi kuphuculwa.
ixesha Post: Aug-24-2018